Ama-iPads amasha ngeke akhishwe kuze kube yingxenye yesibili ka-2017 | Izindaba zamagajethi
Ama-iPads amasha ngeke akhishwe kuze kube yingxenye yesibili ka-2017
Lesi ngesinye sezindaba okufanele sizithathe ngezimbambela ngoba akusemthethweni nhlobo, ngakho-ke ngaphambi kwesikhathi chaza ukuthi ngamahemuhemu aqhamuka kuxhaxha lwezinto ze-Apple, lapho bachaza khona ukuthi ukuthengiswa kwe-iPad kuzoqala ehlobo lalo nyaka. Iqiniso liwukuthi Futhi bekungeke kwenzeke lutho uma i-iPad ibizobambezela okungaphezulu kokulindelekile, okungaba kulenyanga ezayo kaMashi, kepha konke lokhu kufanele kufaneleke ngokwengeziwe.
Empeleni umjikelezo wokuvuselelwa kwe-iPad yakamuva oqalisiwe awufaki futhi yilokho imodeli engu-12,9-intshi yethulwe ngoSepthemba odlule ngo-2015 kwathi iPro engu-9,7-intshi Pro yafika ngoMashi wonyaka odlule. Kuyacaca ukuthi izinsuku zingaba zombili futhi ukuthi ekukhishweni kwangaphambilini kwe-iPad (ngaphandle kweyokuqala eyethulwe Imisebenzi ngoJanuwari 2010) sekusungulwe phakathi kwenyanga kaSepthemba, Mashi kanye no-Okthoba.
Kungakho, njengoba ophakathi kwe-DigiTimes esho kulokhu kuvuza, amamodeli we-iPad amasha okuthi kulo nyaka we-2017 kunamahemuhemu okuthi yi-3 Zingathengiswa phakathi nenyanga kaSepthemba njengoba kwenza ne-12,9-inch iPad Pro. Akekho umuntu ongabazayo ukuthi kunjalo, kepha ukuthola usuku olulungile kungaba "lula" uma sibheka umlando wezinhlobo ze-iPad, sikubona lokho I-iPad mini yethulwe ngo-Okthoba nakwezinye izinhlobo phakathi kukaMashi noSepthemba. Kancane kancane imininingwane ethe xaxa mayelana nalawa ma-iPads amasha iyafika futhi sinesiqiniseko sokuthi izoqhubeka nokwanda njengoba izinsuku zihamba.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » Tablets » Ama-iPads amasha ngeke akhishwe kuze kube yingxenye yesibili ka-2017
IMicrosoft ilahla iMinecraft Windows 10 Iselula
I-Google Maps ngeke ikusize uthole indawo yokupaka